'अत्यधिक धम्की र दबाबपछि गीत हटाउनुपर्‍यो' :: Setopati
'अत्यधिक धम्की र दबाबपछि गीत हटाउनुपर्‍यो'
भगवती पाण्डे बुटवल, साउन १६
गायिका सोफिया थापा । तस्बिर : सेतोपाटी
धम्की र दबाबपछि गायिका सोफिया थापाको गीत युट्युबबाट हटेको छ।
गीतको वितरक कम्पनी हाइलाइट्स नेपालले गीतलाई युट्युबमा प्राइभेट गरेको हो।
थापाको गीतमा 'अबको तीज नो ब्रत प्लिज' शब्द प्रयोग भएको थियो। हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित केही संस्थाहरुले यसको विरोध गरेका थिए।
गीत रिलिज लगत्तै धम्की आएको थापाले सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
'साउन ४ गते रिलिज भयो, त्यहि दिन साँझदेखि धम्की आउन थाल्यो,' थापाले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'वितरकलाई पनि अत्यधिक दबाब र धम्की आएपछि प्राइभेट गर्ने काम भएको छ। उहाँहरु आफूलाई हिन्दु धर्मको संरक्षक भन्नुहुन्छ। मलाइ थाहा छैन उहाँहरु संरक्षक हो कि हैन।'
उनले एउटी महिलालाई धम्की आउँदा समेत सरकारले केही नगरेको बताइन्।
'नो व्रत प्लिज भन्नुको अर्थ निर्जल र निरहार नबसौँ, अरुको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुका लागि तपाईंले व्रतले बसेर हुन्न भनिएको हो', सोफियाले भनिन्, 'पुरुषलाई भनिएको होइन। पुरुष लिङ्गिय चरित्र मात्र होइन। शासकीय चरित्र हो।'
उनले गीतमा आउने असहमतिलाई आफूले स्वीकार गरेको बताइन्। 'असहमति जनाउन अधिकार छ तर त्यसको नाममा हित्सात्मक दबाब दिनुपर्छ भनेर धर्मले भन्दैन', थापाले भनिन्, 'धम्कीले सुरुमा डर लागेको थियो। अहिले लाग्छ स्वभाविक हो। भद्र अहसमति जनाउने अधिकार सबैलाई छ तर हावाको भरमा नकरात्मक कमेन्ट गर्नेलाई इग्नोर गरेको छु।'
उनले आफूले गीत मार्फत् महिला हिंसालाई अस्वीकार गरेको बताइन्। '
समाजमा थुप्रै महिला हिंसा भैराखेका छन् त्यसलाई 'नो' भन्नुपर्छ', थापा भन्छिन्, 'मेरो श्रृजना दबाउन खोजियो। हटाउन खोजियो।'
उनले आफूले तीजमा महिलालाई गुडियाका रुपमा प्रस्तुत गरिएकोमा गीत मार्फत् असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १६, २०७७, ०१:५१:००
भारतले दिएको कोरोनाविरूद्धको खोपबारे जान्नैपर्ने कुरा (भिडिओ)
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको धारा ७६ को व्याख्या (भिडिओ)
कुलमानलाई प्रश्न- तपाईं हटेलगत्तै किन काटिन थाल्यो बिजुली? (भिडिओ)
अंग्रेजी बोल्ने पुस्ताका केटीहरूलाई राजनीति बुझाउने प्रकृति
कति समयमा टुंगिएला सर्वोच्चबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा? (भिडिओ)